Ramatoa iray voalaza fa tsy manam-piahy, mpangataka no teraka tokony ho tamin’ny 03 ora sy sasany. Olona sendra nandalo no nahita azy efa nanena ilay menaky ny ainy tao ambadiky ny fiarakaretsaka iray. Nisahotaka niantso ny mpamonjy voina etsy Tsaralalana ny rehetra noho izany saingy efa tara ireto farany vao tonga. Nalefa tany amin’ny espace medical izay tsy lavitra teo moa izy mianaka taorian’izay. Tsiahivina fa lahikely ilay zaza tsy manan-tsiny ary izay lamba nahafahana nandrakotra azy aloha no nitondrana azy tany amin’ilay tobim-pitsaboana. Fantatra, araka ny vaovao farany omaly hariva, fa eny amin’ny CSB II Maternité «CARMMA» Antohomadinika lalamby no ahitana azy mianaka, efa nahazo ny fitsaboana sy fikarakarana rehetra ary samy salama tsara.